एउटा यस्तो अद्भुत मन्दिर, जहाँ राखिएको छ भगवान गौतम बुद्धको दाँत ! – Sanchar Patrika
August 6, 2020 131
एजेन्सी। भगवान बुद्ध, जसलाई हामी गौतम बुद्धको नामबाट चिन्छाै‌ं। उनकाे मृ’त्यु ईसाइ-पूर्व ४८३ मा भएको थियो। यो घ’टना भएको हजारौं वर्ष भइसक्यो। तर तपाईँलाई अचम्म लाग्न सक्छ, श्रीलंकामा एउटा यस्तो अद्भुत मन्दिर छ। जहाँ आज पनि भगवान बुद्धको दाँत राखिएको दा’बी गरिन्छ। यो मन्दिर श्रीलंकाको क्यान्डी सहरमा छ।
Prevसवारीसाधन देखि सर्वसाधारणलाइ भोलि देखि काठमाण्डौ उपत्यकामा लागु भयो नयाँ नियम, अब कति बजे देखि कति बजे सम्म के गर्न पाइन्छ के गर्न पाइदैन ?
Nextझुटो सूचना फैलाएको भन्दै फेसबुकले पहिलो पटक डोनाल्ड ट्रम्पलाई कारवाही गर्‍यो